Afrika: Internetka xawaaraha sare iyo fursadaha shaqo-abuurka – Kasmo Newspaper
Afrika: Internetka xawaaraha sare iyo fursadaha shaqo-abuurka
Updated - July 29, 2017 11:04 am GMT
London (Kasmo), Internetka ayaa noqday furaha lagu yarayn karo shaqo-la’aanta iyo sinnaan-la’aanta bulshada ee Afrika, sida ay qabaan Jonas Hjort iyo Jonas Poulsen, 2 dhaqaale-yahan oo ka kala tirsan Jaamacadaha Columbia iyo Harvard.
Aqoonyahannadu waxay diyaar u yihiin in ay muujiyaan sida curashada Intrernetka xawaaraha sare uga abuurayo Afrika 4% ilaa 10% shaqo oo cusub; boqolley aad u sarreysa, marka loo eego qaarad baahida ugu horreysa tahay shaqo-la’aanta da’yarta.
Ururka Caalamiga ah “ILO” ee Shaqada ayaa qaba in Afrikada Saxaraha ka hooseysa dad gaaraya 30 malyuun shaqo la’yihiin, halka 247 malyuun shaqaale nugul ama shaqo an joogto ahayn haystaan. Dhibaato taagan oo ku soo biiraysa kobaca dadweynaha, iyada oo sannadka 2050ka la qiyaasayo tirada dhallinyarada qaaraddu in ay gaari doonto 1 Bilyan oo qofood.
Koofur Afrika iyo Nijeriya, 2da dhaqaale ee ugu horreeyay Qaaradda, xogtu waxay tilmaamaysaa, sida dadka aqoonta hoose leh uga heleen Internetka, gaar ahaan Fibre Optic ee badda hoosteeda mara, faa’iido ka badan inta ay ka helaan kuwa aqoonta sare leh.
Sannadkii 2000 xargaha xawaaraha sare, “Broadband” ee Afrika waxay ka hooseeyeen kuwa Luxemburg, maantana waxay garayaan 28,3% iyo qiyaastii 350 malyuun oo macaamiil ka mid ah 1,2 Bilyan oo dad ah (Internet World Stats).
Internetka xawaaraha dheer wuxuu sahlay ballaarashada adeegyada leh muhimada iT-ga ee qaybaha qaarkood, sida maaliyadda, wuxuuna sare u qaaday wax-soosaarka warshadaha.
Silicon Savannah oo loola jeedo Kenya, ilaa intii ay noqotay guntinta High-Tech ee Afrika, waxaa baahista Internet-ka ku abuurantay 150 ganacsi oo cusub (Mc Kinsey Global Institute). Sidoo kale Nijeriya oo suuqa iT-gu dhaliyay 100,000 oo shaqo oo toos ah iyo 1,1 malyuun oo dadban, intii u dhexaysay 2004-2014kii.
Awa Caba oo 27 jir ah waxay u dhalatay Senegal waxay leedahay Bar e-commerce ah oo sare u qaadda shaqada beeraha kumannaan dumar ah, kuna xirta macaamiishooda.
Njeri Rionge (Libaaxadda) oo Kenya u dhalatay waa asaasaha “Wananchini Group”, waxayna ganacsi ku bilowday $500,000 oo Dollar u rogtay mid ka mid ah Shirkadaha bixiya adeegga Internetka Bariga Afrika oo idil.
Jason Njoku oo 30 jir u dhashay Nijeriya, waxaa isaga iyo saaxiibkiis Bastian Gotter, asaaseen iRoko-Tv, Shirkadda 1aad ee Afrika ee qaybinta muuqaallada Video iyo badeecooyinka Tv-yada, oo u dhiganta “Netflix-kii Afrika”.